आन्तरिक पर्यटकका कारण झरनाको रौनक बढ्दै
विसं १९७५ मा ७५ पैसाको हुलाकी टिकटमा रुप्से झरनाको फोटो टाँसिए पनि अहिले उक्त टिकट प्रचलनमा छैन । साविकको दाना गाविसले झरना र अन्धगल्छीको मुख्य भागसम्म पुग्ने पदमार्ग तथा भ्यूटावर निर्माण गरेको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिका प्रमुख डमबहादुर पुनले आधारभूत आवश्यकताको पूर्वाधार विकासमा गाउँपालिकाले प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गर्ने जानकारी दिनुभयो । झरनामा कान्छा भूमेदेवताको बासस्थान रहेको विश्वासले हरेक वर्षको जेठ महिनामा स्थानीयवासीले बोको बलि चढाउने गर्छन् । झरनालाई धार्मिक दृष्टिकोणले समेत पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सकिने सम्भावना देखिएको छ ।रासस
धार्मिक, मनोरञ्जन, सम -सामयिक, समाज
मनोरञ्जन, मुख्य समाचार, लेख रचना/कबिता, सम -सामयिक
होली खेल्ने नाममा विकृति नफैलियोस् !
बालगृहमा सामूहिक भाइटीका
आज भाइटीका पर्व, बिहान ११ः०२ बजे उत्तम साइत
आज मादल बजेको किन ? गाउँघर दुनियाँ ब्यूँझाउन !
न्युयोर्कमा विविध कार्यक्रम गरि दिपावलीको शुभकामना कार्यक्रम सम्पन्न